Sistemụ Cleaner & Antivirus, Mac gị dị njikere maka naanị otu euro | Esi m mac
Nọgide na-enwe ezigbo ahụ ike nke kọmputa anyị Mac dị mkpa, ọ bụghị naanị maka ha, mana n'ihi na n'ụzọ a ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị ga-abụ nke na-enye afọ ojuju karị, anyị ga-enwe udo nke uche na data anyị niile dị mkpa, foto na ndị ọzọ dị mma, na ngwaike ahụ ga-enwe ike ịme macOS rụọ ọrụ nke ọma dịka o kwesịrị, site na arụmọrụ nwere oke, mmiri na ọsọ.
Ee, ọ bụ eziokwu na kọmputa Mac, ọbụlagodi obere ike, bụ anyaụfụ n'ihe gbasara ike na arụmọrụ, mana ọ bụkwa eziokwu na akụrụngwa anyị chọrọ nrụzi pere mpe iji nwee ezigbo ahụike. Maka nke a, Movavi na-enye anyị Ihe nhicha sistemụ & Antivirus, a bara uru ngwá ọrụ juputara ọcha anyị Mac na anyị nwekwara ike inweta naanị otu euro. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị nke ụdị a ma ị tufuru onyinye ndị ọzọ m na-ewetara gị kwa ụbọchị, nọgidenụ na-agụ ma echefula ohere a.
1 Gị Mac kọmputa njikere na Movavi System Cleaner & Antivirus
1.1 Ọrụ na atụmatụ
Gị Mac kọmputa njikere na Sistemụ kọmputa & Movavi Antivirus
Ekwenyesiri m ike na "Movavi" dị ka ọtụtụ n'ime gị, na anyị ewetarala gị ụfọdụ onyinye ndị ọzọ sitere na ndị mmepe a, ha niile bụ ngwa na-emezu ihe ha kwere na nkwa, ihe dị mkpa, nke ahụ na-enyekwa interface nghọta ma dị mfe iji, yana nnukwu arụmọrụ. Taa bụ oge nke Movavi Sistemụ & Antivirus, ihe eji enyere anyi aka na-anyị Mac ọcha na free of malware, na dị ka mgbe niile, n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa.
N’agbanyeghi na komputa Mac anyi na sistemu macOS di oru oma nke oma, nke bu eziokwu bu na ihe mkpofu na-agbakọ na-eme ka Mac anyị belata, ya mere, anyị chọrọ ngwá ọrụ na-achọpụta ihe mkpofu a ma mee ka ọ pụọ n'anya. N'aka nke ọzọ, kọmputa dị na apụl bitten na-adọta mmasị na-arịwanye elu n'etiti ndị cybercriminal, anyị ahụlarịrị ụfọdụ egwu dị egwu nke data onye ọrụ na nchekwa nọ n'ihe egwu. Luckily ọ naghị abịaru nso na nsogbu nchekwa nke sistemụ ndị ọzọ, mana ha dị, yabụ anyị chọkwara ụfọdụ nchebe megide malware, nje na egwu ndị ọzọ na cyber.
Ọfọn, ihe ndị a bụ ebumnuche abụọ bụ isi anyị ga-arụzu Ihe nhicha sistemụ & Movavi Antivirus, melite ahụike nke Mac anyị ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma dịka ụbọchị mbụ, ma debe ozi anyị nke ọma.
Ọ bụrụ na Mac gị anaghịzi arụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka ụbọchị mbụ, ị gaghị atụ ụjọ, ọ bụ ihe nkịtị ebe ọ bụ site na iji onwe ya achikọtara usoro dum nke faịlụ enweghị isi na-anọgide na-ezo na anyị na-adịghị ọbụna mara na e nwere nchọgharị akụkọ ihe mere eme, oyiri faịlụ, caches, foduru nke ngwa na anyị wepụrụ, na na. Sistemụ Cleaner & Antivirus Movavi na-enyere gị aka ịchọta faịlụ ndị a niile ma kpochapụ ha n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa. Nke a ga - ewepụta oghere na kọmputa gị, ọ ga - ebido ịrụ ọrụ nke ọma karịa, n’ụbọchị mbụ ị wepụtara ya na igbe ya.
Ọrụ na atụmatụ
N'ime ọrụ ndị bụ isi nke ngwa ọrụ a zuru oke bụ:
Mezue nhicha nke usoro ihe niile na-ehichapụ ihe nzuzo niile na faịlụ log na-ewe ohere bara uru na kọmputa gị.
Mkpokọta na nchekwa na-ezighi ezi nke bina.
Ikekwe ị nwere na-emegharị faịlụ na Mac gị, ma ị maghịdị ya; Movavi Sistemụ & Antivirus ọ ga-achọpụta ha, gosi ha gị ma wepu oyiri ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nyocha draịvụ ike, yabụ ị ga - ahụ nke folda na-ewere ohere kachasị ma ikekwe tụlee ịkwaga ya na ngwaọrụ ọzọ.
Nnukwu faịlụ ọchụchọ na ngwa ahụ ga-egosi gị iwu site na nke kachasị nta. N'ezie enwere ụfọdụ vidiyo furu efu n'ebe ahụ nke ga - emeri gị ohere dị ukwuu.
Iwepụ ngwa kpamkpam na n'enweghị, na-ewepụ faịlụ niile na foduru ndị metụtara ha.
Ọkụ nke na-echebe gị pụọ na mbuso agha yana ị nwere ike ịhazi iwu dị iche iche.
Antivirus, iji kpuchido kọmputa gị na malware.
Ebe nchekwa n'efu, mere na kọmputa gị na-arụ ọrụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ were were.
Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị na-eche ihu na ngwa zuru ezu n'ezie na otu ọnụahịa, dị mma maka akụrụngwa gị iji rụọ ọrụ nke kachasị mma, yana data gị ga-adị mma.
Movavi Sistemụ & Antivirus Ọ nwere ọnụahịa oge niile nke euro 14,99 na Mac App Store n'agbanyeghị, dịka akụkụ nke nkwalite ọrịre Mac App Store, ugbu a ị nwere ike nweta ya karịa pasent iri itoolu na ụma maka naanị € 1,09. Ngwa a dakọtara na OS X 10.7 n'ihu, dị n'ọtụtụ asụsụ, gụnyere Spanish, na Nkwalite ahụ ga-akwụsị echi, Fraịde, Mee 12. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ngwá ọrụ yiri nke a, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị ghara ịtụgharị ya wee jide ya Movavi Sistemụ & Antivirus ozugbo enwere ike ka ị rite uru na onyinye a. Ọ bụrụ n'ikpeazụ emezughi ihe ị tụrụ anya ya, ị nwere ike weghachite ya wee weghachi ego gị.
IHE: abughi m Mac ma ọ bụ na m nwere mmekọrịta ọ bụla na onye nrụpụta ngwa a ma ọ bụ jiri ego na ọnọdụ enyere, yabụ na anyị nwere ike hụ na ọ dị irè n'oge mbipụta nke post a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Sistemụ Cleaner & Antivirus, Mac gị dị njikere maka naanị otu euro
Apple kwuputara Reno City Data Center Mgbasawanye